पुरुष र महिलाको करमिक सम्बन्ध
सबैलाई थाहा छ कि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पछाडि धेरै लाइभहरूको पछि लागेका छन् जुन हाम्रो वर्तमान मा सिधा असर छ। साथै, हरेक महिला र मानिसको बीचमा कार्मिक जडान छ। आखिर, यदि एक विशेष जीवनमा तिनीहरूको बाह्य उपस्थिति परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि दयालु आत्माहरू एकअर्कालाई सम्झन्छ।
Karmic जडानहरू - तिनीहरूलाई कसरी चिन्न सकिन्छ?
यस समय कर्मिक जडान निर्धारण गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्:
प्रवर्तन द्वारा विभाजन;
हालै, एस्लोरिक विज्ञानले यस प्रकारको विज्ञानलाई plectology को रूपमा जन्माएको छ, धन्यवाद किनकि हामी आज मानिसको र एक महिलाको कर्मिक सम्बन्धको बारे जान्दछौं।
यसकारण, जो साथीहरू अघिल्लो जीवनहरूमा प्रेमको जस्तै बलियो भावनाले बाँधिएका थिए, उनीहरूको वर्तमानमा एकअर्काको अस्तित्वमा संदेह गर्न सक्दैन, पूर्ण जीवन बिताउँदछ, परिवारसँग छ। एक क्षणमा एक व्यक्ति एक असीमित स्नेह, एक अजनबी को लागि प्रवचन महसुस गर्न सक्छ। एक मौका बैठक सबै चीजहरू माथि उल्लेखित गर्न सक्षम छ, वा यसको विपरीत। त्यस्ता व्यक्तिहरू सधैं एक-अर्काको नजिक हुन र केही समय पछि तिनीहरू आफ्नो पूर्व जीवन खेल्न चाहन्छन्, जसले अनसुलझे क्षणहरू छोडे।
केर्मिक संचारको लक्षण
पुरुष र एक महिलाबीच दुई प्रकारका केर्मिक सम्बन्ध छन्:
ऋण-लेनदार । यस योजनाको नामले पुरानो जीवनमा साझेदार मध्ये एक अनसुलझे संघर्ष, समस्याहरु र शायद, ऋण थियो सुझाव दिन्छ। अन्त्यमा, फेरि मिलेको छ, दुबै समान पाठ सिक्नै पर्दछ। सबैभन्दा रोचक कुरा भनेको कर्मको ऋणमा आधारित छ, जसमा दुवै भूमिका पाइन्छ, धेरै निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, अतीतमा "लेनदेन" "देय" द्वारा आक्रामक थियो र वर्तमान मा, पूर्व बीमार पतिको भूमिका खेल्छ, दोस्रो - पत्नी, जसले उनको हेरचाह गर्न योग्य छ।
चुम्बन । Karmic एक व्यक्ति संग संचार एक महिला को जीवन पूरै गर्न सक्छ। यो यिन र यांग हो, जो एक मात्र हो। दुवैको ऊर्जाको लागि धन्यवाद, तिनीहरू सुधार गर्दै छन्, अभूतपूर्व महत्त्वपूर्ण सारांश सम्म पुग्छन्।
कर्मिक बांडको साथमा प्रेमको बीच प्रेम यति बलियो छ कि कुनै झन्झट, कुनै द्वन्द्वको अवस्था, गलतफ्लुन्डिङ तिनीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन।
यो ध्यान दिनु हुँदैन कि, विशेषज्ञहरु को अनुसार, जो युगल 5-15 वर्ष को उमेर को अंतर हो, कार्मिक सम्बन्धहरु द्वारा एकजुट हुन्छ। प्राय: त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, त्यहाँ कुन कुरालाई प्रेमलाई पहिलो नजर भनिन्छ।
चक्रहरुको लागि मन्त्र
टटू स्टार - अर्थ
एक तितली टैटू के हो?
कष्ट - मूल्य
दुष्ट आँखा र खराबपन को लक्षण
Hieroglyphs फेंग शुई
जादूगर टटू - मूल्य
फेरोज़ा स्टोन - जादुई गुण
लिप वृद्धि पंप
नर्बेको: संयुक्त जिमनास्टिक्स
मिलिया कुनिस र अशटन कुचेरको छोराको पहिलो फोटो वेबमा देखा पर्यो
पेट र पछाडि हिँड्नु
Rudbeckia "चेरी ब्रान्डी"
डट्सको साथ मैनीक्योर
मूत्राशय को सिस्टोस्टोमी
मिरांडा केरले आफ्नो गोप्य आहारबारे प्रशंसकहरुलाई भने
Esophagitis - लक्षणहरू
शरद ऋतुमा आँशु रोपण
केक को लागि क्रीम क्रीम
फूल बल्बहरू - जुन तपाईका आन्तरिकका लागि विकल्पहरू उत्तम छन्
कसरी स्ट्रिपटीज नृत्य गर्न सिक्नु हुन्छ?
यौन असहमति - पुरुष र महिलाको लामो समयसम्म अपमानिता - परिणामहरू
बिरालोहरूको लागि अहिले फिड गर्नुहोस्
गुलाबी चमडा जैकेट